Author: lu bo | 9:35 PM | No မှတ်ချက် | Aungzaw Win
Author: lu bo | 9:30 PM | No မှတ်ချက် | Tin Nyunt
Author: lu bo | 9:07 PM | No မှတ်ချက် | Thanlay Ko
Author: lu bo | 9:05 PM | No မှတ်ချက် | ဓမ္မရတနာ
အကြွေးဆပ်လာတဲ့သားသမီးနဲ့ အကြွေးတောင်းလာတဲ့သားသမီးဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်...။
Author: lu bo | 8:57 PM | No မှတ်ချက် | ‎Htar Htar Kein‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
.............................. Level(2) Lesson (35) ................................. Rebecca: ကြည့်ရတာ စားသောက်ဆိုင် က ကောင်းပုံရတယ်။ This looks likeanice restaurant. . Scott: အင်း၊ ကောင်းတယ်။ အမြဲတမ်းလာဖြစ်တယ်။ Yeah, it is. I come here all the time. . Rebecca: အဲဒီမှာ ထိုင်ရအောင်။ Let's sit over there. ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
Author: lu bo | 8:55 PM | No မှတ်ချက် | ဓမ္မရေချမ်းစင်
တရားအားထုတ်နေဆဲ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ သာမက၊ တရားအားမထုတ်ဖြစ်သေးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များပါ သိသင့်သော မေးခွန်းလေး ဖြစ်သည့်အတွက်-
ဓမ္မာနန္ဒဝိဟာရကျောင်း တရားစခန်းတစ်ခု မှ ယောကီ(ဒေါ်ခိုင်ခိုင်)က သူသိချင်သော မေးခွန်းကို တရားပြသူအား မေးမြန်းခြင်းဖြင့် -
Author: lu bo | 8:48 PM | No မှတ်ချက် | Thanlay Ko
Author: lu bo | 8:48 PM | No မှတ်ချက် | Tin Nyunt
Author: lu bo | 8:06 PM | No မှတ်ချက် | Thanlay Ko
ကိုဖိုးသန် နဲ့ ရဲမျိုးတို့ နှစ်ယောက် အိမ်ပြန်လာတယ်။ လမ်းမှာ... "ဟေ့... ရွှတ် ရွှတ်" နဲ့ ခေါ်သံကြားလို့ ရဲမျိုးက လိုက်ကြည့်တော့ အမျုိးသမီးချောချောတစ်ယောက်ကို တွေ့တယ်၊ သူတို့ ဖြတ်လာတဲ့တိုက်အပေါ်ထပ် ပြူတင်းပေါက်ကနေ ခေါ်နေတာ။
ရဲမျိုးက ဘာလဲဆိုပြီး မေးငေါ့ပြတယ်။
ကိုဖိုးသန်က 'သွားရအောင်ပါကွာ'... ဆိုပြီး ရဲမျိုးလက်ကို ဆွဲခေါ်တယ်။
ဟိုမိန်းမက ထပ်ခေါ်ပြန်တယ်... ...
"ဟေ့... ရွှတ် ရွှတ် အပေါ်တက်ခဲ့ပါလား၊ ဒီမှာ ဒို့တစ်ယောက်ထဲ"
ကျွန်တော် တာမွေဘက်ကို ရောက်တိုင်း စိတ်မချမ်းသာစရာ တစ်ကွက်က မြလမ်းမှတ်တိုင်မှာ အသက် ၁၀ နှစ်ကျော်ကျော်လောက် ရှိမယ့် ကလေးတစ်ယောက် ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းနေတာပဲ။ ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
Author: lu bo | 7:53 PM | No မှတ်ချက် | Pawhtun Myaing သနပ်ခါးအာဟာရ
ရွှေဘိုကိုမခိုက် ရှင်မတောင်မှကြို က် နှစ်ချို က်ထူထူ အရောင်ဖြူ ဖြူ မှ ကြည်ဖြူ သတဲ့ လူကမွှေးတာလား သနပ်ခါးကမွှေးသလား...
Author: lu bo | 7:42 PM | No မှတ်ချက် | Phyo Ko Ko Naing
Author: lu bo | 7:17 PM | No မှတ်ချက် | Thanlay Ko
ကျောင်းဆရာမဖြစ်သွားတော့ ပဲခူးတိုင်းထဲက ရွာတစ်ရွာမှာ တာဝန်ကျတယ်။
သမီးလေးတစ်ယောက်ထဲ စိတ်မချလို့ သူ့အဖေရော အမေရော အဲ့ရွာမှာ လိုက်နေတယ်။
အမျိုးသမီးက သူ့ရုံးကလွှတ်လို့ ထိုင်းမှာ သင်တန်းသွားတက်နေတာ။
တရက်ကတော့ လူကြုံရှိလို့ဆိုပြီး သူ့အဖေတွေ အမေတွေအတွက် လက်ဆောင်တွေထည့်ပေးတာ ရလိုက်တယ်။
မန္တလေးကနေတဆင့် ပဲခူးဖက်ကို တဆင့်ပြန်ပို့ခိုင်းတယ်။
လူကြုံပစ္စည်းတင် မကဘူး၊ သူ့အဖေနဲ့ အမေကြိုက်တတ်တဲ့ ပုရစ်ကြော်နဲ့ လဘက်ပါ ဝယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့... မှာတာ မှာတာ ဒီလူမှာ အလုပ်က ရှုပ်ရတဲ့အထဲ အားမနာဘူး။
Author: lu bo | 7:14 PM | No မှတ်ချက် | Tin Nyunt
Author: lu bo | 7:12 PM | No မှတ်ချက် | သစ်ထူးလွင်
ငါးမန်း နောက်တစ်ကြိမ် အရှိန်ဖြင့် ထပ်ပြီး ထိုးဝင်နိုင်ရန် ကြိုးစားပြန်သည်။ ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
Author: lu bo | 10:03 PM | No မှတ်ချက် | Pyay Zin
ရန်ကုန်မှာမွေး ရန်ကုန်မှာကြီးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အီလဲဗင်းကိုကျေးဇူးတင်မိတာအမှန်ပဲ... ရန်ကုန်မှာအချိန်နဲ့အမျှ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတော်တော်များများ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အချိန်ကိုမေ့နေကြတယ်... အခု နာရီဆိုတာကြီးကြောင့် အချိန်ကို သတိပြုမိ လာကြတယ်... ငယ်ငယ်က နာတာတွေပြီးရင်ရီ(ရယ်)ရတယ်ဆိုတဲ့ အရေးအသားဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်... နာပြီးမရီ(ရယ်)နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက် နာရီ ဟာလုံးဝကို အရေးမကြီးဘူး... ရန်ကုန်ဟာမြို့ပျက်ကြီးဖြစ်နေတာကို ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာပါ... ဒါဟာအမှန်တရားပဲ
Author: lu bo | 9:48 PM | No မှတ်ချက် | Tint Swe
နယူးယောက်ဟိုတယ်တွေကနေ ပြောကြပါတယ်။ ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
Author: lu bo | 7:25 PM | No မှတ်ချက် | Aungsoe Petroleum ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်ခါတရံ၌ အရက်နှင့်ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသော ထင်မြင်ချက်များကို ကြားရလေ့ရှိသည် ။ တချို့ကအရက်သောက်ခြင်းကို လူမှုရေးဟုခေါင်းစဉ်တပ်သည် ။ တချို့က သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းအရက်သောက်၍စကားပြောဆိုခြင်း က ပို၍ရင်းနှီးချစ်ခင် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်စေသည်ဟုဆိုသည် ။ တစ်ခါတလေပါပဲ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဟုထင်မြင်တတ်ကြကာ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်ဟုပင် ခေါင်းစဉ်ကြီးကြီးတပ်ကြသည်
။ အရက်လေး တစ်ခါတလေပဲသောက်တာ ကျန်တာအားလုံးကောင်းတဲ့ လူကောင်းတစ်ယောက်ပါဟုဆိုတတ်ကြသည် ။ ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
တစ်ခါမှ တရားမထိုင်ဘူးသူတို့ အတွက်..အသက်ကြီးငယ် အရွယ်မရွေး... "ဝိပဿနာ တရားစတင်အားထုတ် ရှုမှတ်နည်း" Author: lu bo | 7:20 PM | No မှတ်ချက် | ခန္ဓာ-၅ပါး တစ်ဦး
များ ရဲ့ ရေးသားဖေါ်ပြချက်တွေ၊ ဟောကြားခဲ့ရတာတွေ ကို လေ့လာ ဖတ်ရှုထားဖူး၊ နာကြားဖူး ထား ရတဲ့ တရားအားထုတ်နည်း အမျိုးမျိုး ကို ရေးသား ဖေါ်ပြကုသိုလ်ပြုရမှာ တရားအားထုတ်နည်း တွေ က အမျိုးစုံ ရှိတော့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ တို့ နဲ့ ကိုက်ညီဖို့ အတွက် အင်မတန်မှ ခက်ပါတယ်။ ကာယာနုပဿနာ၊ ဝေဒနာနုပဿနာ ၊စိတ္တာနုပဿနာ နဲ့ဓမ္မာနုပဿနာ ဆိုပြီး မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ "သတိပဋ္ဌာန် " လေးပါး ရှိတဲ့အနက် အဲဒီလေးပါးထဲက "ကမ္မဌာန်း" တစ်ခုခု နဲ့ ပွားများအားထုတ်ကြရတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း "ကာယာနုပဿနာ" မှာတင် "ဝင်လေ၊ထွက်လေ" လို့ ခေါ်တဲ့ "အာနာပါန" ကမ္မဌာန်း အပါဝင်ပေါ့လေ..ရှုရမဲ့ ကမ္မဌာန်း (၁၄) မျိုးလောက်ရှိတော့... ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
Author: lu bo | 7:20 PM | No မှတ်ချက် | Tin Nyunt
Author: lu bo | 7:15 PM | No မှတ်ချက် | Tin Nyunt
ဖခင်က ခရစ်စမတ်အတွက် မုန့်ဘူးတစ်ဘူးဝယ်လာသည်။ မုန့်ဘူးက ဈေးကြီးသည်။ မိသားစုအားလုံး ညဘက်တွင် ပျော်ရွှင်စွာစားမည်ဟု ရည်စူးကာ စားပွဲပေါ်တင်ထားခဲ့သည်။ ဖခင်က ခြံထဲတွင်
အလုပ်သွားလုပ်နေစဉ် သမီးလေးနှင့် သူ၏ခွေးကြီးက အခန်းထဲဝင်လာသည်။ ခွေးကြီးက
အနံ့ခံပြီး မုန့်ဘူးကို စားပွဲပေါ်မှ တွန်းချလိုက်သည်။ ထို့နောက် မုန့်တွေကို စားပြီး ခွေးက အပြင်ကို ပြန်ထွက် သွားသည်။
Author: lu bo | 7:11 PM | No မှတ်ချက် | သစ်ထူးလွင်
Author: lu bo | 7:30 PM | No မှတ်ချက် | Thanlay Ko
လူတစ်​​ယောက်​ ဆိုင်​ကယ်​​မှောက်​လို့ ​ဆေးရုံ​ရောက်​လာတယ်​။ သတိ​​​မေ့​နေတဲ့သူ့ ကို အထူးကြပ်​မတ်​ကုသ​ဆောင်​မှာထားပြီး ကုသ​ပေး​နေရတယ်​။
ညပိုင်း​ရောက်​​တော့... သူ့အခန်းထဲ သူနာပြုဆရာမတဦး ၀င်​လာတယ်​။ ဆရာမကိုမြင်​​တော့ သတိပြန်​ရ​နေပြီဖြစ်​တဲ့ လူနာက ​မေးတယ်​... ...
2. MP3 ဘယ်လိုဒေါင်းမလဲ? ဒီ App တွေကနေဒေါင်းပါ ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
Author: lu bo | 7:11 PM | No မှတ်ချက် | Soe Naing
"ပညာရေး၊ မိသားစု၊ ကျန်းမာရေး၊ ....." စတာတွေ တစ်ခုမှစိတ်တိုင်းကျမဖြစ်ဘူးလို့ လူငယ်တစ်ဦးက အဘွားဖြစ်သူကို ညည်းတွားတိုင်တန်းတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကိတ်မုန့်ဖုတ်နေတဲ့အဘွားက မြေးဖြစ်သူကို ကိတ်မုန့်စားမလားလို့မေးတော့ လူငယ်က ဝမ်းသာအားရ ချက်ချင်းခေါင်းညိတ်တယ်။
အဘွားက သူ့ကို ဂျုံမှုန့်စားဖို့ကမ်းပေးတော့ လူငယ်က သဘောမကျဟန်နဲ့ "ဂျုံမှုန့်! ဒီလောက်စားရခက်တာ ဘွားဘွားကလဲ"လို့ပြန်ပြောတယ်။
"ဒါဆိုရင် ကြက်ဥအစိမ်းစားကြည့်ပါလား?" လို့ အဘွားကဆိုတော့ မြေးက "ဘွားဘွား
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ? ဒါတွေက အရမ်းစားရခက်တဲ့ အရာတွေပါ" လို့ဆိုတယ်။
"တကယ်တော့ ဒီအရာတွေကိုယ်၌က စားရခက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး မီးဖုတ်ခဲ့ရင် အရသာရှိတဲ့မုန့်(အချိုပွဲ) ဖြစ်သွားပါတယ်" လို့ အဘွားက ဆက်ပြောပါတယ်။
ဆော်ဒီမှာ ၊ တူရကီမှာ၊ အီရတ်မှာ၊ မူစလင်နိုင်ငံတွေမှာ ဒါမျိုး သွားလုပ်ကြည့်ပါလား၊ ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
Author: lu bo | 10:00 PM | No မှတ်ချက် | Thanlay Ko
ကွန်​ပြူတာကို wifi ချိပ်​ပြီး သုံးချင်တဲ့အ​ခါ သူငယ်​ချင်းရဲ့ ဟိုတယ်​မှာ သွားသုံးရတယ်​။ ​ဟော်​တယ်​​ခေါင်​မိုးထပ်​မှာ dining room ရှိ​လေ​တော့ အဲ့ဒီမှာ သွားထိုင်​ပြီး သုံးရပါတယ်​။ အဲရ်​ကွန်းနဲ့ sky net TV နဲ့ ဆို​တော့ ဟန်​ကျတယ်​။ ကိုယ်က ​သူ​​ထေးရဲ့သူငယ်​ချင်းဆို​တော့ ​ရေ​နွေးကြမ်းနဲ့ ​ကော်​ဖီလည်း အလကားတိုက်​တယ်​။
​နေ့တိုင်း ကွန်​ပြူတာတလုံးနဲ့ dining room ထဲ လာလာထိုင်​​နေတဲ့ကိုယ့်​ကို ဘာထင်​တယ်​မသိပါဘူး
တရက်​​တော့ ​ဟော်​တယ်​၀န်​ထမ်း​လေးက လာ​ပြောတယ်​... ...
'ဦး​လေးက ကွန်​ပြူတာ အရမ်းကျွမ်းတယ်​​နော်​'... တဲ့
နှိင်းယှဉ်မှတ်သားနိုင်စေဖို့ ရှင်းလင်းသွားပါမယ် ၊ တစ်ခုချင်း တွေ့တာလေးတွေကို မှတ်ထားရာကနေ ပုံစံကွဲလေးတွေ တွေ့လာတဲ့အခါ ရောထွေးသွားတတ်တာ ဝေခွဲ မရဖြစ်သွား တာမျိုးလေးတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ခါတည်း နှိင်းယှဉ်မှတ်သားလိုက်လျင် မရှုပ်ထွေးတဲ့အပြင် တခြားသူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ ကြုံလာလျင်လည်း ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြောဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အသေးစိတ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရှင်းပြထားပါတယ် ၊ အဆက်အစပ်မိသွားအောင် အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ပါ လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် .. ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
Author: lu bo | 10:00 PM | No မှတ်ချက် | သုတဇုန်
တစ်ခါတုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ သင်္ဘောပျက်ပြီး ကျွန်တစ်ကျွန်းပေါ်က တစ်ယောက်တည်း ရောက်သွားသတဲ့။
သူဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူ့ကို ကယ်ဖို့ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းပါတယ်။ အကူအညီများ လာလေမလားလို့ ကမ်းစပ်က ပင်လယ်ထဲကို မျှော်ကြည့်တာလည်း အချိန်တိုင်းလိုလိုပါပဲ။ မျှော်ပေမယ့် အရိပ်အရောင်တောင် မတွေ့ပါဘူး။
ကျွန်တော် အင်တာနက်ကို မသုံးနိုင်ကြတဲ့ အချိန်ကတည်းက ကွန်ပျူတာသုံးတာ။ ကွန်ပျူတာ သုံးတာ စာစီစာရိုက်လုပ်ချင်တာလည်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာထဲကို Encyclopedia စီဒီတွေထည့်ပြီး စာတွေ ဖတ်ရတာ သဘောကျတယ်။
တက္ကသိုလ်တက်စဉ်က ကွန်ပျူတာ မပေါ်သေးဘူး။ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကို နေ့တိုင်းသွားတယ်။ စာဖတ်ခန်းထဲမှာ ထားပေးထားတဲ့ Encyclopedia တွေကို တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ်လိုက်ဖတ်တယ်။ ကူးစရာတွေ ထိုင်ကူးတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ Encyclopedia တွေကြည့်လို့ရတဲ့ခေတ်ရောက်လာတော့ စီဒီတွေ ဝယ်စုပြီးဖတ်တယ်။ အဲဒီထဲက အကြောင်းတွေကို စာရေးတယ်။ Encyclopedia တွေရှိနေသမျှ ထမင်းမငတ်တော့ဘူးလို့ သိလာတယ်။
အင်တာနက်ကို တစ်မျက်နှာပေါ်လာဖို့ အကြာကြီးထိုင်စောင့်ရတဲ့ ခေတ်ကတည်းကသုံးတယ်။ တစ်နာရီ ၁၅၀၀ ကျပ်၊ ၂၀၀၀ ကျပ်ပေးရကတည်းကလည်း သုံးတယ်။ တစ်ခါ download လုပ်ထားရင် တစ်နာရီလောက် ကြာတတ်တဲ့ ခေတ်ကိုလည်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
"စက်ဝိုင်းမှာ ဘာတွေရေးထားမှန်း..မသိဘူးဆိုသူတို့ အတွက်..ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ရှင်းတမ်း( ပထမပိုင်း )"
Author: lu bo | 9:56 PM | No မှတ်ချက် | ခန္ဓာ-၅ပါး တစ်ဦး
"ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်" ဒေသနာတော်ဟာ ခက်ခဲနက်နဲ လှတဲ့အတွက်..
"ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ရှင်းတမ်း" လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီစာစု ကို ပြုစု ရေးသားဖို့ အတော်အချိန်ယူခဲ့ရတဲ့အပြင်၊ အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်ရ လွယ်အောင်နဲ့ စာကြောင်းရေ နည်းအောင် ကြိုးစားထားပေမယ့် စာကြောင်းရေ က များရသည်က တစ်ကြောင်း၊ ဖေ့စဘုတ် စာမျက်နှာတွင် စာကြောင်း အရေအတွက် ကို ကန့် သတ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ( နှစ်ပိုင်း) ခွဲပြီး ရေးသား ဖေါ်ပြလိုက်ခြင်းကြောင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ အနေ ဖြင့် ဖတ်ရှုမှု လွယ်ကူစေရန် အတွက် အရင်ဆုံး လက်ကိုင်ဖုန်းမှာသော်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ ကွန်ပြူတာ မှာ သော်လည်းကောင်း သိမ်းဆည်းပြီး၊ အချိန်ပေးနိုင်မှသာ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
" ဆည်မနိုင်တဲ့ စုန်ရေ " Author: lu bo | 9:56 PM | No မှတ်ချက် | Khant Naing
ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်သည်။ သေချာအောင် စောင်ထဲက ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ပိုက်ဆံ တစ်ထောင်တန်ကိုမြင်မှ စောင်ခြုံပြီး အသာပြန်ကွေးနေလိုက်သည်။ ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့
Author: lu bo | 9:23 PM |2Comments | Myanmar Daily Star
အသက် ၂၀ တုန်းက အိမ်မှာနေတာနဲ့ ခရီးသွားတာ သိပ်မကွာလှပါ။ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် ခဏလေးနဲ့ အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်သွားတယ်။
အသက် ၃၀ မှာ နေ့တာနဲ့ ညတာ သိပ်မကွာလှပါ။ ဘယ်နှစ်ညပဲ အိပ်ရေးပျက်ပျက် ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲ။
အသက် ၄၀ ရောက်တော့ ဘွဲ့ရတာနဲ့ ဘွဲ့မရတာ သိပ်မကွာလှပါ။ ကျောင်းမပြီးလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ၀င်ငွေပိုကောင်းနေသလုိုပဲ။
Author: lu bo | 9:23 PM | No မှတ်ချက် | Aung Cho
လူမမာရဲ့ အနာရောဂါက ဆရာတွေစုံ အချိန်တွေကုန်ပြီး တော်ရုံနဲ့မပျောက်တော့ ကုမယ့်ဆရာတွေကိုကြောက် အသက်တွေလည်းထောက်ခဲ့ပြီလေ ။
Author: lu bo | 9:23 PM | No မှတ်ချက် | Min Ko Naing
ဒီတစ်ပတ်တော့ စကားတွေ အတူပြောပြီး မငြင်းနိုင်
တော့ဘူး။ စာရေးပြီး ပြောပြတာပဲ တတ်နိုင် တော့မယ်။ အဝေးကြီး ရောက်နေလို့ပါ။ ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာ နောက်ပြီးမှ ပြောပြမယ်။ ဒီရောက်ရောက်ချင်း သမီး နဲ့သားကို သတိရစရာတွေ့တာပဲ။ ဘာလဲဆိုတော့ သမီးနဲ့သားတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းပေါ့။ ကိုယ် သိထားတာ အမြဲမှန်တယ်လို့ ထင်နေရာက နောက်ထပ် အမျိုးမျိုးလည်း ရှိသေးတယ်ဆိုတာ သိရင် အမြဲအံ့သြတယ်၊ ပြီးတော့ သဘောကျတယ် မဟုတ်လား။